Shirka Madaxda Soomaalida iyo Beesha Caalamka oo Maalintii Labaad Muqdisho Ka Socda • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Federal Republic of Somalia / Shirka Madaxda Soomaalida iyo Beesha Caalamka oo Maalintii Labaad Muqdisho Ka Socda
Shirka Madaxda Soomaalida iyo Beesha Caalamka oo Maalintii Labaad Muqdisho Ka Socda
December 5, 2017 - By: Omar Akhyaar
Waxaa magaalada Muqdisho maalintii labaad ka socda wejigii 2-aad ee shirkii London ee arrimaha Soomaliya,kaasi oo Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdulaahi Farmaajo uu ka Furay Magaladda Muqdisho maalintii shalay ahayd.
Shirka waxaa ka qeybgalaya madaxda dowladda Soomaaliya,kuwa dowlada Goboleedyada iyo saaxiibada beesha Caalamka,waxaana lagu wadaa in maanta la soo gabagabeeyo, islamarkaana laga soo saaro qodobo muhiim u ah Soomaaliya.
Madaxweyne Farmaajo oo khudbad ka jeediyay furitaanka Shirweynaha wuxuu sheegay in Dowladda Federaalka Soomaaliya ay ka go’antahay dhismaha ciidan qaran oo tiro iyo tayo ahaanba ku filan in ay amniga kala wareegaan Ciidanka Nabad Ilaalinta Afrika ee Soomaaliya (AMISOM).
Wuxuu ugu baaqay beesha caalamka in ay dhankooda si mug leh u buuxiyaan kaalinta ay maanta Soomaaliya ka sugayso, gaar ahaan dagaalka ka dhanka ah argagixisada Alshabaab.
Waxaa kaloo shirkan sidoo kale si weyn loo falanqeeyey ahmiyadda ay leedahay xoreeynta Deegaanada ay ku dhuumaalaysanayaan maleeshiyada Shabaab iyo isku dhafka ciidamadda Qaranka,kuwaasi oo ah waxyaabaha ay dowladda Soomaaliy mudnaanta siindoonto.
Ujeedka guud ee shirkan ka socda magaalada Muqdisho ayaa ah in dowladda Soomaaliya ay soo bandhigto waxyaabihii uga qabsoomey shirkaasi oo wejigiisa koowaad ka dhacay magaalada London ee xarunta Dalka Brtian bishii May ee sanadkan 2017. Waxaa kaloo diiradda lagu saaraya waxaa kamid ah arrimaha dhaqaalaha iyo siyaasadda halka.